Ulawulo lweKontrakta ngokugqibeleleyo olunikezelwa nguZeevou
Iimbonakalo » Ulawulo lwekhontrakthi
Ukulawula ngokulula iinkampani zangaphandle kunye nokufikelela ngokulula kuluhlu lwemisebenzi abayinikiweyo.
Umsebenzi wokukhuphela wenza ubomi bube lula. Okanye ubuncinci ke umntu unqwenela ukucinga. Omnye wemicimbi ephambili kwimisebenzi yokukhutshelwa ngaphandle kukuba kunzima kakhulu ukugcina iinkampani zangaphandle zisaziswa ngokubhukisha kwakho okutshintsha rhoqo. Ngaphaya koko, ukwaba imisebenzi kunye nokulandelela inkqubela phambili kwisikali phantse kufuna abasebenzisi be PMSes kunye Abaphathi beZiteshi ukusebenzisa izicelo zomntu wesithathu ezinje asana or Trello ngenxa yokusikelwa umda kwiimpawu eziphambili zenkqubo kunye nokusebenza.
Ulawulo lweprojekthi kunye nokwabiwa kwemisebenzi yeenkampani eziqeshisayo zeeholide ezisebenza ngaphezulu kwesixeko esinye kunokuba ngumceli mngeni omkhulu.
Lunganceda njani uLawulo lweeKontrakta zikaZeevou?
IZeevou ikuvumela ukuba wenze iprofayili kwinkampani nganye okhuphela icandelo lakho Imisebenzi ukuya. Umzekelo, unokwenza inkampani kwifayile ye- kucoca umboneleli, kwaye nxulumana Iprofayile yomlawuli nayo.
Oku kuvumela umphathi ukuba angene kwaye afumane umbono olinganiselweyo wekhalenda yokubhukisha (ngaphandle kokubona iinkcukacha zeendwendwe okanye iimali zokubhukisha). Ngapha koko, banokufikelela kuluhlu lwemisebenzi, kubandakanya ukuphuma okuzenzekelayo kunye ukuhlala phakathi imisebenzi yokugcina indlu, kunye nayo nayiphi na into onokuyenza ngesandla.
Abaphathi beenkampani zokucoca banokumakisha iyunithi Ucocekile nje ukuba kugqityiwe ukucoceka, ukuze uhlale uhlaziyekile kuzo zonke izinto ezigqityiweyo kwaye ungababuza ukuba ngexesha elithile iyunithi obulindele ukuba icocwe isabonakala ingcolile kwinkqubo.